Inkampani yethu - SHANGHAI KAIQUAN PUMP (GROUP) Co., Ltd.
Lapho KuneKaiquan, Kukhona Amanzi
Uma uvula iwebhusayithi yethu, sikubonga ngobuqotho ngokuthakazelisa enkampanini yethu. Isikhathi ezindizayo, World Changing. Manje sonke sijabulela ikhulu elisha, ukuhwebelana kwembulunga yonke, ukwaziswa. Thina i-Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd yayikhula ngokushesha ukuba yinkampani yepompo engu-1 eChina, okuvela eminikelweni enkulu yezisebenzi zethu zonke, sisebenza kanzima, silwa nomsebenzi ongenakwenzeka, sihlala sigcina umoya up. Ngihlala ngikholelwa ukuthi amakhasimende namabhizinisi ethu yizinto ezikhona zokuvumelana, futhi ngiyawazisa amazwi okuhlakanipha athi "Ibhizinisi liyithuluzi lomphakathi".
Thina i-Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd silandela umgomo "Woklomelisa izwe lethu nge-Sustainable Pump Industry", futhi asenzi nje kuphela ibhizinisi, okwamanje, sinesibopho sentuthuko yomphakathi nokuxhumana.
Thina Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd futhi silandela umgomo "Ozithobayo, othembekile, ubuntu", futhi sihloniphe ikusasa. Asigwedli kangako emfuleni, siphula ubunzima futhi sidlulisela phambili ngobuhlungu ngokumomotheka nokuzethemba, nokwakha ikusasa elihle lezinto zebhizinisi, emphakathini ngokwakha okunengqondo, ukuphathwa, ubuchwepheshe, ukumaketha kanye nensizakalo.
Lobu ubukhosi obukhulu, senza inqubekela phambili ngaso sonke isikhathi.
SiyiShanghai Kaiquan, sisebenza nenhlanganisela yemvelo yabantu, impompo, namanzi, futhi sisebenza kanzima ukuklomelisa izwe lethu embonini yepompo nokuqalisa kabusha isizwe sethu esikhulu samaShayina.
Ekugcineni, samukela ngokufudumele ukuvakashelwa kwakho endlunkulu yethu. Ake sithuthukise umhlaba omusha !!!
IShanghai Kaiquan Pump (Group) Co. Ltd. AbakwaChairman noMongameli uLin Kaiwen
IShanghai Kaiquan Pump (Group) Co. Ltd.yinkampani enkulu yepompo yobungcweti, egxile ekuklameni, ekukhiqizeni nasekuthengiseni amaphampu asezingeni eliphakeme, izinhlelo zokuhambisa amanzi nezinhlelo zokulawula amaphampu. Kuyinto ehamba phambili futha yokukhiqiza iqembu eChina. Amandla abasebenzi abangaphezu kwe-4500, aqukethe ngaphezulu kwe-80% yabaphethe idiploma yasekolishi, onjiniyela abangaphezu kwe-750, odokotela, kwenza kube yisinqumo esihle kakhulu sethalente. Iqembu linempahla engama-dollar ayizigidi ezingama-500, amabhizinisi ama-7 namapaki wezimboni ama-5 eShanghai, eZhejiang, Hebei, Liaoning nase-Anhui, ahlanganisa indawo ephelele engamamitha skwele acishe abe ngu-7,000,000 nezindawo zokukhiqiza ezingaphezu kwamamitha-skwele angama-350,000.
IShanghai Kaiquan inikezwe lezi ziqu ezihloniphekile ezilandelayo: IShanghai Quality Golden Prize, indawo yesine ku-Top 100 Shanghai PVT Enterprise, Shanghai Top 100 Technical Enterprise, Grade AAA China Quality Credit, Grade AAA National Contract Credit, Enterprise Excellent in Quality, Creditability and Services , Okuhweba Okuncintisana Kakhulu Kwezimpahla ZaseChina, kanye Nophiko Oluthuthukile Lokwakhiwa Kwamasiko Kazwelonke. Ngo-2014, iShanghai Kaiquan yakhethwa njenge-Top 500 embonini yemishini iminyaka emithathu ilandelana, yahola indawo yokuqala embonini yepompo ezweni lonke.
IShanghai Kaiquan ifaka phakathi inani lokuqala lokuthengiswa embonini yepompo kazwelonke iminyaka eyi-13 ilandelana, futhi ivolumu yokuthengisa yaleli qembu yeza ngama-dollar ayizigidi ezingama-330 ngo-2014, cishe ivolumu ephindwe kabili yombangi omkhulu oholele indawo yesibili. Ngonjiniyela bayo abangama-300, iShanghai Kaiquan isihlanganise izinsiza nobuchwepheshe. Ngosizo lwezinhlelo ze-ERP neCRM, inikeza izixazululo zobuchwepheshe kumakhasimende ayo esikhathini esincane. Ngaphezu kwalokho, isungule inethiwekhi yesevisi kazwelonke enezinkampani ezingama-24 zokuthengisa zamagatsha nezinhlangano ezingama-400. Ngaphezu kwalokho, yenza i- "Blue Fleet Services" kanye nendlela yokusebenza kwamahora ama-4, ephendula izidingo zamakhasimende nganoma yisiphi isikhathi. Okubaluleke kakhulu eShanghai Kaiquan ngaso sonke isikhathi ukukhiqiza imikhiqizo yokuncintisana nethembekile nokwanelisa amakhasimende.
Kwasungulwa izikhungo ezintathu zocwaningo lobungcweti
Ukuthengiswa kwanyanga zonke kudlule ama-yuan ayizigidi ezingama-500, futhi ukuthengisa kwonyaka kudlule u-4.2 billion yuan Lanzhou Technology Center neZhenjiang Technology Center kwasungulwa
Kukhethwe ku-Top 100 Machinery Industry
Kuklonyeliswe ibhizinisi "Elithembekile"
Thola isitifiketi senkonzo yezinkanyezi ezinhlanu
Thola umklomelo weChina Imishini Yezimboni Yezesayensi Nobuchwepheshe
UKaiquan uqale ukuguqulwa kwe-Industry 4.0
"Hlanganisa ndawonye ebubini nasebubini," umgubho weminyaka engamashumi amabili uRiviera
Inani lokusayina lenyanga eyodwa likaKaiquan lidlula ama-yuan ayizigidi ezingama-400
Kaiquan AP1000 / CAP1400 amandla enyukliya unit amandla umthamo wamakhemikhali futha Kaiquan, ACP1000
imishini yamandla enuzi impompo yokupholisa amanzi kanye nepompo yokukhipha imfucumfucu ikudlulise ngempumelelo ukuhlolwa kwamandla kazwelonke
Isibonelo se-CAP1400 / ACP1000 yeqembu lamandla enyukliya esijwayelekile esiqhingini esikhulu sokuphakelwa kwamanzi kanye nokujikeleza kwempompo yamanzi okumpompa ngempumelelo kudlulise ukuhlolwa kwesazi
Kwakhiwa futhi kwasetshenziswa i-workshop enomsebenzi osindayo otshaliwe imali eyizigidi eziyi-150
IKaiquan Group ithole i- "Civilian Nuclear Safety Machinery and Equipment
Ilayisense Yokuklama / Yokukhiqiza "yamaphampu enuzi asezingeni eliphakeme kanye nasesikhungweni semfundo ephakeme; Uhlobo lwepompo lokususa imfucuza lwe-AP1000 lweKaiquan Group ludlulise ngempumelelo ukulinganisa;
Ama-prototypes womkhiqizo omusha weyunithi yamandla enuzi ka-1000MW kanye neyunithi yamandla kagesi ashisayo bakudlulise ngempumelelo ukuhlolwa
IKaiquan Group idlulise ngempumelelo "ukubukezwa komklamo we-Huangdao National Petroleum Reserve Underground Water Seal Cavern Submerged Oil Pump"
Kwaqalwa ucwaningo kanye nokwakhiwa kwamaphampu wesibili nawamabanga aphezulu wamandla enuzi ngamayunithi ayisigidi-kilowatt, amaphampu amathathu amakhulu eziqhingi ezijwayelekile kanye namaphampu amakhulu ezigidi ezintathu-kilowatt amandla kagesi ashisayo; amabhentshi wokuhlola ukushaqeka okushisayo enyukliya aphase ukuhlolwa kwamanani; utshalomali lwama-yuan ayizigidi eziyi-10 ukwakha ilabhorethri yokucwaninga ngomshini kanye nebhentshi lokuhlola iMechanics; tshala imali eyizigidi ezingama-150 ukwakha ibhentshi lokuhlola elicijile kakhulu kanye nebhentshi elikhulu lokuhlola iphampu
Kuqale ukuthuthukisa amandla enuzi amaphampu esiqhingi ajwayelekile
UKaiquan usebenzise izizumbulu zemali ukuthenga imishini yokucubungula esezingeni eliphakeme njengesikhungo semishini yokuxhuma ama-axis amahlanu kanye ne-lathe eyi-8 yemitha eyi-CNC ethe thuthu kakhulu
IShijiazhuang Kaiquan Impurity Pump Co, Ltd. yasungulwa, kwasetshenziswa ifektri entsha ehlanganisa indawo engamahektare angama-70
IKaiquan Group ithole uHefei Sanyi futhi izokwakha indawo yokukhiqiza ehlanganisa amahektare angama-400 eHefei
Kwaqalwa kwenziwa ucwaningo nokuthuthukiswa kwamaphampu asezingeni eliphakeme neliphezulu emandleni enuzi kanye namaphampu eziqhingi ajwayelekile, kwafakwa nezicelo zamalayisense okukhiqiza ezokuphepha ezisekelweni zenuzi.
Iqembu lidlule ngempumelelo isitifiketi sekhwalithi yemvelo ye-ISO14001
Inani lokusayinwa nyangazonke leKaiquan lidlule ama-yuan ayizigidi ezingama-200
UKaiquan uzuze umklomelo wesibili weNational Science and Technology Progress Award "wokucwaninga nokusetshenziswa kwetiyori nobuchwepheshe obukhulukazi bepompo elicwilayo"
UKaiquan usayine isivumelwano sokuthengwa kwesoftware ne-ANSYS Inc ukwethula ukwakheka kwe-hydraulic okuthuthuke kakhulu nesoftware yokulingisa uketshezi
I-Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd. yasungulwa, futhi kwasetshenziswa isitshalo esisha esimboza indawo engama-50 mu
Ukuphumelela okukhulu sekuzuziwe kubuchwepheshe bempompo yokugeleza kwe-axial enkulu, ipompo lokugeleza le-oblique nepompo enkulu yokudonsa ephindwe kabili kusitshalo samandla
IKaiquan yenza ngcono isakhiwo sebhizinisi, ihlanganisa uhlelo lokukhiqiza lube ngezigaba ezine zebhizinisi: ukwakhiwa, ukuphathwa kukamasipala, ukulethwa kwamanzi, imboni nezimayini, futhi kusungula isikhungo sokusebenza
Ukucwaninga nokuthuthuka kwepompo ye-desulfurization yegesi, iphampu yamapayipi kawoyela, impompo yempuphu, impompo kawoyela wamalahle, ipompo lokucindezela okuphezulu kanye nepompo lokulinganisa, elingazivumelanisa nezinqubomgomo zikazwelonke zezimboni necebo likazwelonke
Uphawu lwentengiso lweKaiquan lwaziwa ngokuthi "wuphawu lokuhweba oludumile lwaseChina", futhi selungenise imali engenayo ephezulu yokuthengisa engama-20 embonini yepompo emhlabeni
Isitshalo esiphelele esinendawo yokwakha engama-27000m2 eShanghai Huangdu factory sisetshenziswa ngokusemthethweni
Iqembu leKaiquan libhekwa njengelesithathu emisha ezimele yamabhizinisi aphezulu nobuchwepheshe obuphezulu bebhizinisi le-100 eShanghai
Ukucwaninga nokuthuthuka kwepompo yamakhemikhali, ipompo yokuphaka ibhoyili ephezulu, ipompo yesilayidi, ipompo kawoyela, iphampu ye-condensate, ipompo le-condensate, insimbi engagqwali yokunyathela ipompo ye-multistage, imishini yokuphakela amanzi engeyona engemihle, uhlelo lokulawulwa kweqembu, njll.
Kaiquan ahlabayo uhlobo indle futha iwine Shanghai okusunguliwe futhi indalo patent umklomelo, futhi workshop esindayo wasetshenziswa ngokusemthethweni
Imikhiqizo yaseKaiquan iwine isihloko "sokuhlolwa kukazwelonke imikhiqizo yamahhala" kanye "nemikhiqizo yomkhiqizo odumile waseShanghai"
Thuthukisa isizukulwane esisha samanzi ashisayo ajikeleza ipompo, inqubo yamakhemikhali futha, mpo shaft futha ende nezigaba eziningi zesigaba sezimayini, bese uqhubeka nokungena emkhakheni wemboni nowami
Iqembu leKaiquan liqede ukuhlangana kwenkampani kagesi yaseShanghai Tangfeng
Inani lokusayinwa nyangazonke leKaiquan selidlulile kumaki wezigidigidi ezingama-yuan, owabeka isisekelo esiqinile seKaiquan ukuba yimboni yamaphampu ephezulu engama-20 emhlabeni
Ukucwaninga nokuthuthukiswa kwepompo yendle ecwilisiwe enomsebenzi wokusika, i-valve yokugubha, ipompo yokuzimela kanye nepompo enkulu yokugeleza kwe-axial submersible ne-patent kazwelonke
Iqembu lidlule ngempumelelo isitifiketi se-ISO9001: 2000, saba ibhizinisi lokuqala lokudlulisa isitifiketi embonini yempompo yaseChina
Thuthukisa ipompo entsha yokuphuma kwendandatho yamanzi, iphampu yamakhemikhali elula nepompo yesihlangu ngezinga eliphakeme lamazwe omhlaba
UKaiquan uqede ukuhlanganiswa kweziteshi zokuthengisa zohlobo lwenkampani futhi waqala ukumaketha ngobuningi
IKaiquan yethule ngokulandelana imithethonqubo yokuphatha eyi-103 ukuvikela ukukhula okunempilo kweKaiquan
Ipaki lezimboni laseZhejiang Kaiquan elinotshalo-mali oluphelele lwama-yuan angama-110million laqalwa ngokusemthethweni
Thuthukisa imikhiqizo efana nengcindezi yomlilo eguquguqukayo, ukumpompa indle, ukuxuba nokunye
Ngokusebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe obuvela phesheya, sithuthukise ipompo yokudonsa yesizukulwane esisha i-kqsn single, engena esikhundleni semikhiqizo engenisiwe, futhi ithuthukisa ijubane elithile eliphansi nokusebenza kahle kwepompo yokudonsa kabili nge-ns = 30, egcwalisa igebe phakathi ezamazwe omhlaba kanye nezasekhaya
Kuyaziwa njenge "Shanghai Municipal Enterprise Technology Center"
Ukuthengiswa kwenyanga kukaKaiquan kudlule ama-RMB ayizigidi ezingama-800.
Ukuthengiswa kwenyanga kukaKaiquan kudlule ama-RMB ayizigidi ezingama-600.
Ukuthengiswa kwenyanga kukaKaiquan kudlule ama-RMB ayizigidi ezingama-500.
Ukuthengiswa kwenyanga kukaKaiquan kudlule ama-RMB ayizigidi ezingama-400
Iminyaka engamashumi amabili Kaiquan
Umshini oyimodeli we-Main Feed Pump ne-Circulating Pump Set of KAIQUAN Group udlulile ekuhlolweni kochwepheshe.
I-workshop esindayo ebiza izigidi ezingama-150 ye-RMB iqediwe futhi iyasebenza
Inani lokusayina lokuthengisa lanyanga zonke likaKaiquan leqe inani elingamamiliyoni angama-300 we-RMB Mark
IKAIQUAN ithole iLayisense Yokuklama kanye Nezinto Zokukhiqiza Zikazwelonke Zokuphepha Kwenuzi.
Umbhede wokuhlola ukushaqeka okushisayo kwepompo yesibili yenuzi kudlulile ukuhlolwa.
Umcimbi wokuqhekeka komhlaba weKaiquan Industrial Park eHefei.
Uthole umklomelo wesibili wenqubekela phambili kazwelonke yezesayensi nezobuchwepheshe.
UXi Jinping, ngaleso sikhathi owayenguNobhala weZhejiang Provincial Party Committee, wamukele ngemfudumalo uLin Kevin, uMongameli weqembu.
Indawo entsha yaseKaiquan Huangdu Industrial Park yakhiwe futhi yasetshenziswa.
Inani lesivumelwano sokusayina sanyanga zonke sokusayina se-KAIQUAN selidlule kwizigidi eziyi-100.
IZhejiang Kaiquan Industrial Park iqale ukwakhiwa
IKaiquan Technology Centre ilinganiselwe njengesikhungo sobuchwepheshe bamabhizinisi kamasipala waseShanghai
Ipaki yezimboni iShanghai KaiQuan huangdu yaqedwa futhi yaqala ukusebenza.
IShanghai KaiQuan ithuthukise ngobuciko umkhiqizo omusha kazwelonke - ipayipi lempo leKQL eliqondile mpo yasesiteji esisodwa se-centrifugal.
Shanghai KaiQuan water supply engineering co., Ltd. yasungulwa